Opinions & Discussion » မင်းမခြစ်လဲ နေဗါ ရဒယ်… မင်းမခြစ်လည်း နေဗါကွယ် Selection	17
Ma Ma says: အများလိုလားသူတိုင်းလည်း ရွေးသင့်သူ မဟုတ်နိုင်ဘူး။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အခုအချိန်ထိတော့ ယောယိမ်းလိုက် ဘသားယိမ်းလိုက်ပဲ့ပြားပင်တွေ နဲ့ ကိုင်းပင်တွေ ရောနေအုံးမှာပါဘဲ
မြစပဲရိုး says: ပူမနေနဲ့ ကြောင်ကြောင် မသိဘူးလား။
kai says: ၂၀၁၀တုံးကလည်း.. ဟိုလိုလို.. ဒီလိုလို.. ဒီ့လိုလို.. ဒီဒါလိုလို.. ကွီကွာလိုလို..
ဖွတ်.. ရှုး..ပဒတ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: Respect the Power of her Words.
I salute you Kyi Phyu Shin. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ဇီဇီခင်ဇော် says: မှန်လိုက်လေ အရီး ရေ (အဲ) မကြည်ဖြူရှင်ရေ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဲဒီတော့ ???
@QUIL@ says: သခင်မျိုးဟေ့ ဒိုဘာမန်…
မင်း ခန့် ကျော် says: အမတ်မထည့်သူများအားးး
ဦးကျောက်ခဲ says: ဖွဘုတ်မှာ ရယ်စရာတွေဖတ်ရတယ်… ဟီ ဟိ ကြံဖန် ဟာသပြောတဲ့သူတွေ…
တန်ဘိုးရှိတဲ့ မဲတစ်ပြားကို အလဟသမဖြစ်စေချင်လို့ အမုန်းခံနေတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ကျွန်မ ကတော့ ဘယ်ပါတီ ကိုမှ အစွဲ မရှိဘူး။
ဦးကျောက်ခဲ says: ” တစ်သီးပုဂ္ဂလ က တော်ပြီး ဒီချုပ် က လူ ညံ့ နေရင် တော် တဲ့ လူကိုဘဲ ရွေးချင်တာဘဲ ”
မြစပဲရိုး says: . ပြောလက်စ နဲ့ မဆိုင်တာ သတိပေး ဦးမယ်။
aye.kk says: မချစ်ပဲနဲ့မနေနိုင်တာပါ
အောင် မိုးသူ says: စုမှ စုပဲ ဒါပဲ။
Alinsett @ Maung Thura says: .ကြောင်ကြောင့်အသားကို နွှင်ပြီး ကြော်ဆားမဲ